Tshintshela US dollar Ukuze Rand
Ihlaziywa amazinga otshintshiselwano 16/04/2021 15:44
US dollar Ukuze Rand ukuguqulwa. US dollar intengo kwi Rand namhlanje kwimarike yokutshintshiselana ngemali.
1 US dollar = 14.30 Rand
Ixabiso lokutshintsha kwe US dollar ukuya Rand inexabiso eliphakathi kuyo yonke imithombo. Utshintsho kwixabiso lotshintshiselwano lwe US dollar ukuya Rand yenzeka kanye ngemini. Iibhanki zibandakanyeka kutshintsho lwe US dollar ibe Rand. US dollar iyenyuka. Nge-1 US dollar ngoku kufuneka unikeze 14.30 Rand. I US dollar inyuke ngokuthelekisa Rand ngu 95 amakhulu ngamakhulu eepesenti.
Imali yokutshintsha US dollar Ukuze Rand
Kwiveki ephelileyo, US dollar inokuthengiselwa 14.59 Rand. Iinyanga ezintathu ezidlulileyo, US dollar inokuthengwa 15.18 Rand. Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, US dollar ziya kutshintshiselana 18.92 0 Rand. Apha kubonisiwe itshathi yereyithi yokutshintshiselana yamaxesha ahlukeneyo. -3.96% ngenyanga - utshintsho kumanani otshintshiselwano US dollar. -24.4% - utshintsho kumanani otshintshiselwano US dollar ukuya Rand ngonyaka.
Imali yokutshintsha US dollar (USD) Ukuze Rand (ZAR) Bahlala kwi zonaniso Forex
Uguqulelo lwemali US dollar Rand
US dollar (USD) Ukuze Rand (ZAR)
1 US dollar 14.30 Rand
5 US dollar 71.51 Rand
10 US dollar 143.02 Rand
25 US dollar 357.55 Rand
50 US dollar 715.09 Rand
100 US dollar 1 430.18 Rand
250 US dollar 3 575.45 Rand
500 US dollar 7 150.90 Rand
Ukuguqulwa kwemali namhlanje kunika 143.02 Rand ye 10 US dollar. Isiguquli semali ngoku sinika 357.55 Rand ye 25 US dollar. Isiguquli semali ngoku 50 US dollar inika 715.09 Rand. Ukuguqula imali namhlanje 100 US dollar inika 1 430.18 Rand. Ukuba unayo 250 US dollar, ke ngaphakathi Mzantsi Afrika banokuthengisa 3 575.45 Rand. Namhlanje, 500 US dollar ziya kutshintshiselana 7 150.90 Rand.
US dollar Ukuze Rand Imali yokutshintsha
US dollar Ukuze Rand namhlanje 16 UTshazimpuzi 2021
16.04.2021 14.345897 -0.1765 ↓
15.04.2021 14.522397 -0.02749 ↓
14.04.2021 14.549887 -0.0893 ↓
13.04.2021 14.639188 0.046996 ↑
12.04.2021 14.592192 -
US dollar ukuya Rand 16 UTshazimpuzi 2021 - 14.345897 Rand. 15 UTshazimpuzi 2021, 1 US dollar iindleko 14.522397 Rand. 14 UTshazimpuzi 2021, 1 US dollar iindleko 14.549887 Rand. US dollar ukuya Rand 13 UTshazimpuzi 2021 - 14.639188 Rand. Ubuncinci US dollar ukuya Rand ukulinganisa ngaphakathi yayivuliwe 16.04.2021.
US dollar Ukuze Rand imbali izinga lotshintshiselwano
US dollar kunye ne- Rand iimpawu zemali kunye namazwe